Ny Tari-dalana avy amin'ny Semalt: Ahoana ny fiarovana ny tenanao amin'ny Sarintany amin'ny karatra
Na dia eo aza ny ezaka ataon'ny manampahefana sy ny masoivohon'ny fiatrehana ny hosoka amin'ny karatra sy karazana teknolojia hafa, dia tokony ho fantatrao fa ny fiarovana ny karatra fiasanao dia manomboka aminao. Ny ampinga manan-danja indrindra amin'ny heloka bevava dia fampahalalana momba ny fanatanterahana azy. Midika izany fa mahatsikaritra ny karazana fandrika ampiasain'ireo mpanao heloka bevava sy ireo marika hikarakarana.
Ny Lisa Mitchell, mpitantana ny Success Successor avy amin'ny Semalt , dia namaritra fampahalalana mahasoa izay hanampy anao ho voaro amin'ny hosoka amin'ny carte de crédit.
Ny hosoka avy amin'ny carte de crédit dia vita amin'ny fomba telo:
1. Mpikatroka nahazo ny karatra fitrosana: ny valim-bolo sy ny mpangalatra dia mety hampiasa ny fangalarana an-kifonofono na fomba fijery mifanohitra kokoa mba hananana ilay karatra eny an-tanany. Indraindray, ny tanana tsy mety dia afaka mifandray amin'ny karatra efa voaraikitra. Mety ho azony avy amin'ny biraom-pifandraisana, bara fanariana na aiza na aiza. Amin'ny alàlan'ny karatra eny an-tanany sy ny aterineto malalaka amin'ny aterineto, dia mety tsy azo eritreretina mihitsy aza
2. Ny mpilalao sarimihetsika karta: miaraka amin'ny antsipiriany momba ny karatrao, ny mpanao heloka bevava dia afaka mametaka ny karatra na mampiasa ny vaovao maloto. Ny resadresaka momba ny mpitsikera karatra dia lohahevitra mafana foana rehefa dinihina ny hosoka amin'ny carte de crédit. Skimmers mamaky sy manoratra ny antsipirian'ny karatry ny carte de crédit. Matetika ny mpividy ny carte de crédit dia ampiasaina amin'ny milina vola ary miaraka amin'ny fakantsary..Ao anatin'ny minitra vitsy dia azo adika sy vola ny karatra.
3. Ireo mpiasa tsy mahay mitondra teny amin'ny magazay, tobin-tsolika, trano fisakafoanana na toerana hafa ampiasanao ny carte de crédit dia afaka mamaky ny antsipiriany momba ny carte de crédit ary mampiasa teknolojia Wireless mba hanaovana hosoka amin'ny karatra.
Tsapanao fa tsy afaka mampiasa karatra mangalatra amin'ny fomba iray izay manala ny toerana misy azy na ny maha-izy azy ny mpanao hosoka. Tsy afaka mividy entana amin'ny Amazon, ohatra, ary entiny any an-tranony. Ny fanontaniana lehibe iray dia mitranga: ahoana no ahazoan'izy ireo vola tena izy amin'ny asa tsy ara-dalàna?
Ny ankamaroan'ny sambo mpikarama-bola ao amin'ny carte de crédit dia mitarika ny antoko tsy manan-tsiny amin'ny fandidiana azy ireo mba hahazoam-bola madio. Afaka mandefa dokam-barotra ho an'ny lahatsoratra malaza amin'ny tranokala e-commerce izy ireo. Ny mpanao heloka bevava raha ny marina dia tsy manana ilay izy, fa rehefa mividy azy io ny mpivarotra an-tserasera tsy manan-tsiny, dia mihodina indray ny mpanao heloka bevava ary mividy zavatra mitovy amin'ny magazay amin'ny aterineto miaraka amin'ny nomeraon'ny CC. S / izy dia mametraka ny adiresin'ny mpandefitra amin'ny maha-sambo azy. Avy eo, nandefa ny fivarotana mivantana tamin'ny mpividy izy, fa mahazo vola izy ary afaka mandany izany amin'ny fomba rehetra.
Inona no azonao atao mba hialana amin'ny sazy ara-bola?
Efa nahazo karatra fitakiana ianao tao amin'ny trano fisakafoanana iray, fivarotana entam-barotra, ny tobim-pitsaboana, ny solika, na ny toerana hafa. Eken'ny rehetra fa ny fampiasana carte de crédit dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fanatanterahana ny vola. Na izany aza, mety hisy loza mety hitranga any amin'ny toerana iray isaky ny misy fahadisoana rehefa ampiasaina ny karatra fampindramana, toy ny fanadinoana ny fidirana karatra amin'ny carte de crédit taorian'ny fifanakalozana, na rehefa tsy mandray andraikitra ny karatra.
Ireto misy toro-hevitra mahasoa momba ny fomba hialana amin'ny hosoka amin'ny carte de crédit:
Tandremo ny fampahalalana ao amin'ny Internet
Aza avela hanome ny fampahalalana momba ny carte de crédit
Manara-maso ny carte de crédit sy banky
Karohy ny adiresy mailaka amin'ny rafitra ara-bola sy ny biraon'ny paositra
Mametaka dokam-barotra mafonja mba hampihenana ny fahazoanao ny fampahalalana azonao amin'ny maso maro
Ny tanjona manan-danja dia ny miaro ny fampahalalana ao amin'ny Internet. Misy mpanadihady an-tapitrisa sy mpitsikilo ao amin'ny tranokala mitady vola maimaim-poana. Izay manome ny fampahalalana manokana ataonao manokana amin'ny aterineto dia araka ny fahamendrehanao, fa azo antoka kosa ny manandrana manao izay tsara indrindra vitanao mba tsy hitrangan'izany, indrindra ho an'ny fampahalalana momba ny carte de crédit Source .